इलेक्ट्रोनिक कमर्स (वाणिज्य) — Vikaspedia
इलेक्ट्रोनिक कमर्स (वाणिज्य)
इलेक्ट्रोनिक कमर्स के हो?
इ-कमर्स अपरेटर को हो?
के इ-कमर्स अपरेटरलाई पञ्जीकरण गराउनु अनिवार्य छ?
के इ -कमर्स अपरेटरका माध्यमले आपूर्ति गर्नेले वस्तुहरूको आपूर्तिकर्ता सीमारेखाको छुट प्राप्त गर्ने हकदार हुन्छ?
के एक इ-कमर्स अपरेटर यस्ता वस्तुहरू वा सेवाहरूको आपूर्तिका सम्बन्धमा करको भुग्तान गर्नका लागि उत्तरदायी हुन्छन् जसको आपूर्ति उनीद्वारा गरिएको छ,वास्तविक आपूर्तिकर्ता बिना ?
के अधिसूचित सेवाहरूमाथि करको भुग्तान गर्नका लागि उत्तरदायी इलेक्ट्रोनिक कमर्स अपरेटरहरूको सीमारेखाको छुटको लाभ उपलब्ध हुन्छ?
स्रोतमाथि कर सङग्रह (टिसीएस) के हो?
योअति सामान्य हो जबकि ग्राहकले इ-कमर्स कम्पनीहरूलाई माल फर्काइ दिन्छन्। यसरी फर्काइएको माललाई कसरी समायोजित गरिन्छ?
कराधीन आपूर्तिको शुद्ध मूल्य के हो?
के प्रत्येक इ-कमर्स अपरेटरले वास्तविक आपूर्तिकर्ताका तर्फबाट कर एकत्रित गर्नु आवश्यक छ?
इ-कमर्स अपरेटरले कुन समयमा कथित कर एकत्र गर्नु पर्छ?
इ-कमर्स अपरेटरले कति समय भित्रमा सरकारी खातामा कथित टिसीएस जमा गर्नु पर्छ?
वास्तविक आपूर्तिकर्ताले यस टिसीएसको दावा कसरी गर्न सक्छ?
के इ-कमर्स अपरेटरले कुनै विवरण प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ? ती कस्ता विस्तृत जानकारीहरू छन् जसलाई विवरणमा प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ?
इ -कमर्स प्रावधानहरूमा मिलानको के अवधारणा छ र यसले कसरी काम गर्दछ?
यदि विवरणको मिलान हुन सकेन भने तब के हुन्छ?
के कर अधिकारीहरूसँग कुनै अतिरिक्त शक्तिङरू प्राप्त छन्?
इलेक्ट्रोनिक कमर्सको अर्थ हो डिजिटलमा डिजिटल उत्पाद वा इलेक्ट्रोनिक नेटवर्कमा वस्तुहरू र सेवाहरू वा दुवैको आपूर्तिका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
इलेक्ट्रोनिक कमर्स अपरेटरलाई यस्तो व्यक्तिको रूपमा परिभाषित गरिएको छ जो इलेक्ट्रोनिक कमर्सका लागि डिजीटल वा इलेक्ट्रोनिक सुविधाहरू वा प्लेटफर्मको मालिकले, संचालन वा प्रवन्धन गर्दछ।
हो, इ-कमर्स अपरेटहरूका लागि सीमारेखाको छूट (थ्रेसहोल्ड एक्सेम्पसन) को लाभ उपलब्ध छैन र त्यो उनीद्वारा आपूर्ति मूल्यको परवाह नगरी पञ्जीकृत गराउन उत्तरदायी हुन्छ ।
होइन,यस्तो आपूर्तिकर्ताहरूका लागि सीमारेखा छुट उपलब्ध हुँदैन र उनीहरूले कति मूल्यको आपूर्ति गरेका छन् त्यसको परवाह नगरीनै उऩीहरू पञ्जीकरण गराउनका लागि उत्तरदायी हुन्छन्। यो आवश्यकता, जबकि, केवल तब मात्र लागू हुन्छ जब आपूर्ति यस्तो इलेक्ट्रोनिक कमर्स अपरेटरका माध्यमले गरिन्छ जसका लागि स्रोतमाथि कर एकत्र गर्नु अनिवार्य छ।
हो, तर केवल कतिपय अधिसूचित सेवाहरूका मामिलामा मात्र। यस्ता मामिलामा करको भुग्तान इलेक्ट्रोनिक कमर्स अपरेटरद्वारा गरिने छ यदि यस्ता सेवाहरूको आपूर्ति उसका माध्यमले गरिने छ र कथित इलेक्ट्रोनिक कमर्स अपरेटरमाथि त्यस प्रकारले अधिनियम लागू हुने छ जसरी कुनै व्यक्ति कथित सेवाहरूको आपूर्तिका सम्बन्धमा करको भुग्तान गर्नका लागि उत्तरदायी हुन्छन् ।
हुँदैन, सीमारेखाको छुट यस्ता इ-कमर्स अपरेटरका लागि उपलब्ध छैन जसलाई उनहरूद्वारा प्रदान गरिएको अधिसूचित सेवाहरूमाथि करको भुग्तान गर्नु अनिवार्य छ।
इ-कमर्स अपरेटरलाई ऊद्वारा गरिएको कराधीन आपूर्तिको शुद्ध मूल्यको एक प्रतिशतभन्दा बढ़ी होइनको दरले गणना गरिएको राशिको बराबर रकम एकत्रित पार्नु आवश्यक छ, जहाँ कथित आपूर्तिका सम्बन्धमा प्रतिफल कथित अपरेटरद्वारा एकत्र गरिनु छ। यस प्रकार एकत्र गरिएको राशिको स्रोतलाई कर सङग्रह (टिसीएस) भनिन्छ।
एउटा इ-कमर्स कम्पनीलाई केवल कराधीन आपूर्तिको शुद्ध मूल्यमाथि कर एकत्र गर्नु आवश्यक छ। अर्को शब्दमा, फेरि फर्काइएको आपूर्तिको मूल्यलाई कराधीन आपूर्तिको कुल मूल्यमा समायोजित गरिन्छ।
कराधीन आपूर्तिको शुद्ध मूल्यको मतलब कराधीन वस्तुहरू वा सेवाहरू वा दुवैको सकल मूल्य हो, ती सेवाहरूलाई छोड़ेर जसमा समग्र कर इ-कमर्स अपरेटरद्वारा देय हुन्छ, जसको भुग्तान कुनै पनि महिनामा सबै पञ्जीकृत व्यक्तिहरूद्वारा यस्ता अपरेटरका माध्यमले गरिएको छ र कथित महिनामा फर्काइएको कराधीन आपूर्तिको सकल/ कुल मूल्यबाट घटाइने छ।
हो, हरेक इ-कमर्स अपरेटरले यस्ता आपूर्तिका सम्बन्धमा कर एकत्र गर्नु आवश्यक छ, जहाँ आपूर्तिसँग सम्बन्धित प्रतिफल इ-कमर्स अपरेटरद्वारा एकत्रित गरिँदै छ।
इ-कमर्स अपरेटरले त्यस महिनामा कर एकत्र गर्नुपर्छ जुन महिना ऊद्वारा आपूर्ति गरिएको थियो।
अपरेटरद्वारा एकत्र गरिएको राशिको भुग्तान उचित सरकारको खातामा एकत्र गरिएको राशिको महिनाको समाप्ति पछिको 10 दिन भित्रमा गर्नु अनिवार्य छ।
अपरेटरद्वारा उपयुक्त सरकारको खातामा जमा गरिने टिसीएसको रकम वास्तविक पञ्जीकृत आपूर्तिकर्ता (जसको तर्फबाट कथित करको भुग्तान गरिएको छ) को नकद बहीखातामा दर्शाइने छ। वास्तविक आपूर्तिकर्ताद्वारा आपूर्तिको सम्बन्धमा कर देयताको निर्वहनका समयमा पनि यसको गर्न सकिन्छ।
हो, सबै अपरेटरले इलेक्ट्रोनिक प्रारूपमा विवरण प्रस्तुत गरिएको बाहिर पठाइएको /आउटडोर आपूर्ति सम्मिलित छ, यसमा त्यसलाई फिर्ता गरिएका वस्तुहरू र सेवाहरूलाई फेरि फर्काइएको आपूर्ति पनि सम्मिलित छ, र त्यसलाई महिनामा ऊद्वारा टिसीएसका रूपमा एकत्रित रकम कथित महिनाको समाप्ति भएको दस दिन भित्रमा देखाउनु पर्छ। अपरेटरले वित्तीय वर्षको अन्तदेखि लिएर 31 डिसेम्बरका दिन एक वार्षिक विवरण दर्ता गर्नु पर्छ जसमा ककति राशिको कर एकत्र गरिएको छ दर्शाइने छ।
एउटा केलेण्डर महिनामा आपूर्तिको विवरण र एकत्र गरिएको राशि, र प्रत्येक अपरेटरद्वारा प्रस्तुत गरिएको उसको वा त्योभन्दा पछिल्लो महिनाको वैध रिटर्न विवरणको साथ मिलान गरिन्छ। जहाँ आउटवर्ड आपूर्तिको विवरण, जसमा कर एकत्र गरिएको छ, जस्तो कि अपरेटरद्वारा त्यसको विवरणमा घोषित गरिएको हुन्थ्यो तब यस्ता अन्तरको सूचना दुवै पक्षहरू/व्यक्तिहरूलाई गरिदिइने छ ।
नै भुग्तानसँग सम्बन्धित आपूर्तिको मूल्य जसका सम्बन्धमा कुनै विसङ्गतिको सूचित गरिएको छ र जसलाई आपूर्तिकर्ताद्वारा विसङ्गति सूचित गर्ने महिनामा ऊद्वारा उसका वैध रिटर्नमा दर्ज गरिएको छैन त्यसलाई कथित आपूर्तिकर्ताको आउटपुट दायित्वमा जोडि दिइन्छ, आगामी केलेण्डर महिनाका लागि जुन केलेण्डर महिनामा विसङ्गति सूचित गरिएको थियो। सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, जसको आउटपुट कर देयतामा कुनै राशिलाई जोडिएको राशिमाथि यस खालका आपूर्तिका सम्बन्धमा देय करको भुग्तान गर्नका लागि उत्तरदायी हुन्छ।
कुनै पनि प्राधिकारी जसको पद उपायुक्तभन्दा कम छैन, नोटिस प्राप्तिको तिथि देखि 15 दिन भित्रमा विनिर्दिष्ट ब्यौरा प्रस्तुत गर्नका लागि इलेक्ट्रोनिक अपरेटरलाई नोटिस जारी गर्न सक्छ।
स्रोत: भारत सरकारको केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय